Ny Vaovao Mahatsiravina Hiahiahiana An’i Navalny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2013 1:42 GMT
Nanindrona tokoa ilay fehin-teny famaranana nataon'i Alexey Navalny tao amin'ny fitsarana, izay mety hampigadra azy enin-taona no mihoatra , fandraisam-pitenenana namely mafy ny governemanta, izay nantsoiny hoe “fitondrana feodaly.” Voarohirohy taminà fanodikodinana vatan-kazo mitentina 500 000 dolara tao aminà orinasam-panjakana iray mpitrandraka hazo tao Kirov ilay bilaogera malaza mpiady amin'ny kolikoly sady mpitarika ny mpanohitra, mpanolo-tsainan'ny governoran'ny faritra no asany tao. Niampanga ny fakàna am-bavany azy ho misy ambadika politika i Navalny sy ireo mpanohana azy. Tamin'ilay fandraisam-pitenenany farany teo anatrehan'ny fitsarana, nanambara i Navalny hoe [ru]:
Ambarako etoana fa manao izay rehetra azonay atao izaho sy ny mpiara-miasa amiko hamotehana io didy feodaly natao tao Rosia io. Hamotika io rafi-pitantanana io izay an'ny antsasaky ny iray isan-jaton'ny vahoaka ny 83 isan-jaton'ny harem-pirenena.
Tao amin'ny pejiny Facebook, ilay Rosiana matematisiana sady mpahay toekarena, Alfred Kokh, dia nanoratra hoe [ru] :
Diso i Navalny ! Tsy rafitra feodaly no misy eto amintsika. Fa “apartheid / fanavakavahana” : fisiana miavaka.
Miaina anaty faritra voafefy mitokana izy ireo, tsy mitovy ny sazy azontsika na dia mitovy aza ny heloka vita, [ary] raha misy iray amintsika sahy mijoro mitaky ny zony—alefa any am-ponja izany olona izany. Izany no antsoina hoe “apartheid”.
Tadiavo, araka ny lazain'izy ireo, ny diso folo. Tsy ho hitanao izy ireny.
Naverina nakarina tao amin'ilay tambajotra sosialy malaza iray VKontakte, ny lahatsoratr'i Kokh izay nitarika adihevitra [ru] teo amin'ireo mpampiasa aterneto roa mikasika ny mahasamy hafa ny fanjakana feodaly sy ny fanjakana “apartheid”, ka nitenenan'ny iray hoe :
Mitovy ireo. Anatin'ny fitondrana “feodaly”, ny “chevaliers” sy [ireo] olona ambony dia miaina lavitry ny tambanivohitra, misy lalàna hafa mifehy azy ireo, sns.
Ary novalian'ilay faharoa manao hoe :
Ampahan'olona (amin'ny mponina) mahazo tombotsoa manokana ny “Chevaliers” sy [ireo] olona ambony. Ny Apartheid [ahitàna] vahiny mpanjakazaka.
“Mijery anao i Navalny.” Sary tamin'ny fampielezan-kevitr'i Navaly ho amin'ny ben'ny tananan'i Mosko HQ, 4 Juolay 2013, sary nalain'i Oleg Kozlovsky, CC 2.0.
Na inona na inona fanapaha-kevitry ny mpitsara amin'ny fotoana hamakiana ilay sazy famaizana amin'ny 18 Jolay, dia toa efa nipetraka ho toy ny simenitra manamafy ny toerana maha-olona mpanome maoraly azy iny fanambaran'i Navalny iny ho an'ny Rosiana maro. Aider Muzhdabaev, tonia lefitry ny famoahana ao amin'iay gazety Moskovsky Komsomolets, dia nanoratra [ru] tao amin'ny bilaoginy Ekho Moskvy :
Tsotra , mazava, ary hentitra ny teny farany nolazain'i Navalny. [Ary koa] Somary tsy voahevitra sy tsy misy lantom-pitenenana na fomba fiteny mahafinaritra. Tsy mpikabary i Navalny. Ary angamba tsy politisiana mihitsy. Angamba nasionalista (tia tanindrazana) izy. Angamba mihitsy aza tsy azo iaraha-miaina, araky ny filazan'ny olona sasany. Tsy haiko…. Fa lehilahy sahy izy, izay tokony hajaina amin'ny maha olombelona azy….
Miainga avy amin'izany, hieritreritra n'i Navalny aho anio, ary hampitaha ny fisainany (ireo fanambarany) miaraka amin'izao zava-mitranga izao.
Amiko, efa tsy fotoana izao hieritreretana ny amin'ny hoe izy ve ilay olona mendrika sa tsia . Teo aloha teo izany no afaka natao, fa ankehitriny efa fahambanian-tsaina.
Ho an'ny lahateny fenon'i Navalny tao amin'ny fitsarana (amin'ny teny Anglisy), azafady jereo eto na eto.